Ny Seranam-piaramanidin'i Samui dia mahita mpizahatany iraisam-pirenena voalohany hatramin'ny Lockdown
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Thailand » Ny Seranam-piaramanidin'i Samui dia mahita mpizahatany iraisam-pirenena voalohany hatramin'ny Lockdown
Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Tongasoa eto amin'ny seranam-piaramanidina Samui
Ny vondrona vahiny voalohany dia tonga tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Samui tao Koh Samui any Thailandy tamin'ny tetikasa Samui Plus Model.
Ahitana an'i Koh Samui, Koh Phangan, ary Koh Tao, nosy Surat Thani, ny tetikasa.
Ny mpandeha rehetra dia nandalo fomba fiasa mahazatra momba ny fitaterana sy ny fahasalamana.
Ny mpitsidika dia ho karohina mandritra ny 7 andro ao amin'ny hotely Quarantine Area mandritra ny 3 andro voalohany ary afaka mivezivezy amin'ny zotra mihidy rehefa afaka izany.
Ny vondrona mpitsidika vahiny voalohany dia nahitana YouTubers sy bilaogera 10 mifandraika amin'ny fizahan-tany avy amin'ny firenena Aziatika sy Eoropeana izay nasain'ny Lehiben'ny Fizahan-tany any Thailand (TAT).
Ny fandraisana ireo mpitsidika dia i Thanet Phetsuwan, lefitry ny Governemanta lefitra misahana ny varotra marketing ao amin'ny Fahefan'ny fizahantany ao Thailand. Ireo mpandeha dia nandalo ny Standard Operating Procedure (SOP) izay nandrakotra ny fitaterana sy ny antony ara-pahasalamana, hoy izy.
Raha ny filazan'Andriamatoa Thanet dia hijanona ao amin'ny hotely Area Quarantine (AQ) mandritra ny 3 andro ireo mpitsidika. Misy trano fandraisam-bahiny 19 misy efitrano 400 eo ho eo izay manome an'io serivisy io.
Manomboka amin'ny andro faha-4 ka hatramin'ny faha-7 dia afaka mivezivezy amin'ny "Seed Routes" miaraka amin'ny orinasa mpizahatany voamarina ho an'ny fenitra Samui Plus izy ireo.
Ny Samui Plus Model dia mety tsy ho antenaina mpitsidika maro noho ireo ao amin'ny tetikasa Phuket Sandbox fa nampahafantatra tamin'ny vondrona iraisam-pirenena izany Koh Samui ary ny nosy akaiky dia vonona handray ireo mpizahatany iraisam-pirenena ary hiantoka ny fiarovana azy ireo, hoy Andriamatoa Thanet.
Ny fepetra ara-pahasalamana an'ny Samui Plus Model dia henjana noho ny an'i Phuket, hoy izy.
Làlana voaisy tombo-kase
Eo ambanin'ny Samui Plus Model, ny mpizahatany vita vaksiny dia afaka mamandrika ny dia amin'ny fandaharam-pianarana Sealed Route satria nosokafana ny alatsinainy 12 Jolay 2021 ny fisoratana anarana ho an'ny taratasy fanamarinana fidirana.